Ireo tompon'andraikitra dia mahita ny Dredging Utica Harbour ho Milestone - Ellicott Dredges
Enga anie 3, 2013
Source: Fandroahana anio By DAN MINER
UTICA, NY (WKTV) - Afaka roa taona dia hanomboka hahita trano fisakafoanana ianao, fivarotana antsinjarany ary mety hisy hotely mipoitra ao amin'ny seranan'i Utica.
Nanomboka ny volana septambra teo ny fanotanana ny seranan-tsambo ary tokony ho hitohy amin'ny taom-baovao. Na izany aza, ny City of Utica sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana dia nahazo ny lanonana krismasy alohan'ny alakamisy teo.
"Vitan'izy ireo izany tamin'ny fotoana firaketana, ry vahoaka," hoy i Carmella Mantello, talen'ny Canal Corporation. “Tombanana ho efa-bolana teo ho eo izahay no ho maina. Tao anatin'ny roa volana latsaka no nanaovan'izy ireo izany. ”
“Tsy mila fifanarahana manokana izany,” hoy ny Mpikambana iray RoAnn Destito. "Napetrakay hiasa ny mpiasam-panjakana anay ary nasehon'izy ireo fa tsy hoe manana ny maha matihanina azy ireo fotsiny izy ireo, fa manana ny fahaiza-manao hanatanterahana an'io asa io - tsy amin'ny ora firaketana ihany fa amin'ny fotoana an-kalitao."
Ny seranan'i Utica, eo amoron'ny North Genesee Street, dia tsy nampiasaina tao anatin'ny 30 taona. Maro aminareo no mety mitadidy ny ben'ny tanàna Utica taloha miresaka momba ny mety ho ananan'ny seranan-tsambo.
"Mandritra ny roa taona ho avy, hojerentsika fa nafindra tany an-tanànan'i Utica ity tranokala ity ary izay antenainay hampiasana betsaka amin'ny manodidina ity tany ity," hoy i Mantello. “Manantena ny hahita ny làlana an-tanety izahay, zana-kazo, angamba marina. Toerana fivoarana marobe ampiasaina, varotra, fialamboly ampahibemaso ary fidirana ho an'ny daholobe eto amin'ny Utica Harbour. ”
83,000 cubic yard dia nohodinina, ary nosokafana indray ny hidim-baravarana. Ny ben'ny tanàna Roefaro dia miantso izany hevitra izany.
"Hamelombelona an'i Utica izany," hoy ny ben'ny tanàna Roefaro. “Izany dia hahatonga antsika ho tanàna fifohazana fantatsika fa afaka hisy ary hamerina antsika amin'ny sarintany ity. Ho tonga any isika, tsy any Oneida County ihany, fa any avaratr'i New York. ”
Orinasa mpamokatra angovo nijanona teo an-toerana, ka ny National Grid dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanadiovana. Ny vidiny dia mihoatra ny $ 100,000,000.
Navoaka avy amin'ny WKTV
Ny sambo izao dia afaka miondrana an-tsambo ao amin'ny Harbour Utica nefa tsy matahotra ny hiala ao anatiny. Ary manantena ny tompon'andraikitra fa midika hoe varotra sy fialamboly midadasika any amin'ny faritra avaratr'i Utica Avaratra. Ny talen'ny State Canal Corp. Carmella Mantello dia nanambara ny alakamisy teo fa vita ny fandavahana ny lakandrano.
Ity no fotoana voalohany tao amin'ny 30 taona izay niangona silt dia nesorina ary ny dingana farany tamin'ny dingana fanadiovana sy fananganana fivoarana lehibe kokoa ao Harbour Point.
Na dia nandany volana maro lasa izay ny vondron'orinasa Canal Corp. nandrava ny seranan-tsambo sy ny tendany, dia ny National Grid no nanatanterahana ny fanadiovana avy amin'ny fanjakana, izay mandany vola 100 tapitrisa mitentina hanaovana izany.
"Dingana iray manakaiky ny famadihana ny zava-misy ny fahitana seranan-tsambo marobe isika, miaraka amina fotodrafitrasa ho an'ny daholobe sy tsy miankina", hoy i Mantello, izay natambatry ny tompon'andraikitra hafa eo an-toerana sy ny fanjakana tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny alakamisy teo.
Ny tranonkala Harbour Point dia tranokala tetika fametavetana ho an'ireo manam-pahefana. Araka ny lalàna napetraka tao amin'ny 2008, ny 10-acre Inner Harbour ao amin'ny tranokala 140-acre dia hafindra amin'ny vondron-fampandrosoana eo an-tanàna raha vita ny fanadiovana, dingana iray izay mety mbola eo amin'ny taona eo ho eo. antsasaky ny sasany, hoy i Mantello.
Manoloana izany dia hiasa ny mpiasan'ny Departemantam-pirenena, ny Departemantam-panjakana miaro ny tontolo iainana sy ny orinasa Canal Corp. hamarana ny fanadiovana.
Vantany vao vita izany, ny orinasa natsangan'ny tanàna dia hitady ireo mpamorona mifanaraka amin'ny fahitan'izy ireo ny fifangaroan'ny fampiasana ara-barotra, fonenana ary fialamboly ao amin'ilay tranonkala.
"Raha misy rano, misy ny varotra ary misy ny fampandrosoana toekarena," hoy ny ben'ny tanàna David Roefaro. “Betsaka ny olona tsy mahalala ny maha-zava-dehibe an'io tetikasa io.”
Voarobok'ireo andiana orinasa maro teo amoron'ny peninsula Harbour Point ilay toerana. Tao amin'ny 1920s, ny toerana no toerana misy ny ivon-javaboary famokarana angovo lehibe indrindra any Amerika Avaratra, hoy ny National Grid.
Ny ben'ny tanàna dia nanondro tetikasa izay efa misy eto amin'ny faritra manodidina, ao anatin'izany ny Holiday Inn Express naroso. Ireo mpamorona maro koa dia nividy fananana ary mikasa ny handrava ny firafitry ny indostria taloha hamolavola ny fivoarana mety hitranga amin'ny faritra manodidina.
Hisokatra ny trano fisakafoanana Nicky Doodles ao amin'ny 51 N. Genesee St., ary i Roefaro dia nilaza fa misy ny mpamolavola mikasa hametraka toeram-pivarotana iray izay hipetrahan'i Chenango Import Motors mandra-pahatongan'ny taona lasa.
Ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny Alakamisy dia natrehin'ilay Mpikambana ao amin'ny fanjakana RoAnn Destito, D-Rome, ary ny Sen. Joseph Griffo, R-Rome.
Nisaotra ny mpiasan'ny Canal Corp. i Destito dia nilaza fa nitahiry vola izy tsy mila manakarama orinasa any ivelany ho an'ny asa.
Notsongaina tamin'ny Dredging Today